Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.2.3 Non-wakiilka
Laba ilaha non-matali yihiin dadka kala duwan iyo qaababka isticmaalka kala duwan.
data Big u muuqdaan in ay la nidaamsan u janjeedhaan in labo siyaabood ee. Tani ma baahna keenaan dhibaato waayo nooc oo dhan of falanqaynta, laakiin qaar ka mid ah falanqaynta waxay noqon kartaa cillad muhiim ah.
Ilo wareedyo ayaa ugu horeysay ee eexda habaysan waa in dadka la qabtay sida caadiga ah waa mana caalamka dhamaystiran oo dadka oo dhan ama muunad random ka dadka wax gaar ah. Tusaale ahaan, Americans on Twitter ma yihiin muunad random of Americans (Hargittai 2015) . Ilo A labaad ee eexda habaysan waa in hababka badan oo data weyn qabsadaan falalka, iyo qaar ka mid ah dadka ka qayb falalka badan oo ka badan kuwa kale. Tusaale ahaan, dadka qaarkood on Twitter ka qayb boqolaal tweets jeer ka badan kuwa kale. Sidaa darteed, dhacdooyinka on boosteejo ah oo gaar ah waxay noqon kartaa mid sii loola muraayad u ah kooxaha qaar badan madal laftiisa.
Sida caadiga ah cilmi doonayaan in ay ogaadaan wax badan oo ku saabsan xogta ah in ay leeyihiin. Laakiin, siin nooca aan wakiilka xogta weyn, waxaa muhiim ah in ay sidoo kale ku dhajisan aad fikirka. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in la ogaado wax badan oo ku saabsan xogta ah in aadan lahayn. Tani waa run gaar ahaan marka xogta in aadan haysan waa si nidaamsan oo kala duwan ka soo data in aadan haysan. Tusaale ahaan, haddii aad qabto diiwaanka call ka shirkad telefoon mobile ah ee dalalka soo koraya, waa in aad u malaynayso ma ahan oo keliya ku saabsan dadka aad dataset, laakiin sidoo kale ku saabsan dadka laga yaabo in aad u xun ku leedahay telefoonka gacanta. Dheeraad ah, Cutubka 3, waxaan baran doonaa oo ku saabsan sida miisaan awood kartaa cilmi in la sameeyo qiyaas fiican ka xogta aan wakiil.